चौडा अनुहार हुने व्यक्ति वुद्धिमानी, गोलो हुने सम्वेदनशील, तपाईको कस्तो ?:: Naya Nepal
चौडा अनुहार हुने व्यक्ति वुद्धिमानी, गोलो हुने सम्वेदनशील, तपाईको कस्तो ?
काठमाडौँ । ज्योतिष अन्तर्गत हस्तरेखा अध्ययन, स्वप्न ज्योतिष, कुण्डली अध्ययन, सामुद्रिक शास्त्र जस्ता कयौँ विद्या हुने गर्दछन्।
सामुद्रिक शास्त्रमा व्यक्तिको शरीर र अंगको बनावटका आधारमा स्वभाव र भविष्यवाणी गर्ने गरिन्छ। आज हामी तपाईलाई समुद्रशास्त्रका अनुसार अनुहारको आकार हेरेर भविष्यवाणी गर्ने तरिकाका बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
१) अण्डा आकारको अनुहार
जुन व्यक्तिको अनुहारको आकार अण्डा जस्तो हुने गर्दछ, यस्ता व्यक्ति आकर्षक हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिको स्वभाव सन्तुलित रहने गर्दछ अर्थात राम्रो, नराम्रो स्थितीमा आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने हुन्छन्। यस्तो आकारको अनुहार हुने स्त्री कला क्षेत्रमा विशेष रुची राख्ने हुन्छन् भने शारिरीक रुपमा केही कमजोर हुने गर्दछन्।
२) लामो आकारको अनुहार
जुन व्यक्तिको अनुहारको आकार लामो र पातलो हुने गर्दछ, यस्ता व्यक्ति शारिरीक रुपमा मजबूत हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्ति सधै स्वतन्त्र रहन मन पराउछन्। यस्ता व्यक्तिको वैवाहिक जीवनमा कहिलेकाही अहंकारले गर्दा सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने गर्दछ।
३) त्रिकोणात्मक अनुहार
जुन व्यक्तिको अनुहारको आकार त्रिकोणात्मक हुने गर्दछ, यस्ता व्यक्ति शारिरीक रुपमा दुब्ला पातला हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिको काम गर्ने शैली निकै नचनात्मक हुने गर्दछ। हरेक काम आफ्नो तरिकाले गर्न सक्ने हुन्छन्। कहिले काही यस्ता व्यक्तिलाई सानो सानो गल्तीमा पनि निकै रिस आउने गर्दछ।
४) चौडा आकारको अनुहार
जुन व्यक्तिको अनुहारको आकार चौडा हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्ति निकै बुद्धिमान हुने गर्दछन्। आफ्नो वौद्धिक क्षमता मार्फत ठूला ठूला समस्या हल गर्न सक्ने हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिको स्वभावमा क्रोध पनि हुने गर्दछ।
५) गोलो वा राउण्ड आकारको अनुहार
जुन व्यक्तिको अनुहार राउण्ड अर्थात गोलो आकारको हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्ति निकै सम्वेदनशील हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिको दोस्रो व्यक्तिको हेरचाहमा कुनै कमी राख्दैनन्। यस्ता व्यक्तिको प्रेम प्रशंग स्थिर र सुखद हुने गर्दछ। यस्ता व्यक्तिले आफूलाई निकै राम्रो जीवन साथी बनाउने गर्दछन्।
वास्तुअनुसार आफु सुत्ने वरीपरी यी सामान राखेमा पुर्याउँछ हानी
काठमाडौँ । व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक दुवै कारणले रातमा निद्रा नपर्ने समस्या हुनसक्छ । तर, यसका साथै बास्तु शास्त्रले पनि रातमा निन्द्रा नपर्नुको कारण उल्लेख गरेको छ । उक्त शास्त्रको अनुसार हामीले गर्ने केहि गल्तीका कारण हामीलाई राम्रोसँग निन्द्रा लाग्दैन ।
बास्तु शास्त्रका अनुसार सुत्ने कोठामा वा विस्तारा नजिकै राखिने केही सामानहरुले पनि हाम्रो निद्रा बिगारिरहेका हुन्छन् ।
मोबाइल वा ल्यापटप
पति–पत्नीको बिस्तारा नजिकै ऐना राख्नुहुँदैन । यसले शारीरिक रोग पैदा गर्छ । पति–पत्नीको बिस्तारा नजिकै ऐना राख्नुहुँदैन ।किनकी पति–पत्नीबीच अनावश्यक मनमुटाव हुन्छ ।
सुत्ने समयमा सधैँ आफ्ना जुत्ता–चप्पल कोठाभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ । यदि जुत्ता वा चप्पल आफ्नो विस्तारा नजिकै राख्नुभयो भने तपाईंमा नकारात्मक उर्जा पैदा गर्छ ।